မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - နောက်ဆုံးလမ်းညွှန် - သတင်း
မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်
မိန်းကလေးတစ် ဦး မည်သို့လာရောက်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်မည်သို့အသက်ရှူရမည်ကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်ဖိနပ်ကြိုးကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးသောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျသူမ၏လိင်စဉ်အတွင်းလာစေခြင်းငှါမပြုခဲ့လျှင် - ငါတကယ်သူမကသူမအတုမဟုတ်ဘဲလာကြဆိုလိုတာက - ထို့နောက်အတော်လေးရိုးသားဖို့, သင်သူမ၏ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ဒါကပြnoနာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတစ် ဦး ဘယ်လိုလာရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ကအဆုံးမှာတော့သင်ဟာ clit ရဲ့မာစတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်နဲ့အတူအိပ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကောင်မလေးဘယ်လိုလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတာထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်စရာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးခြင်းကသင့်ကိုပိုပူလာစေတယ်။
ကြီးမားသော ol '' munchy အနမ်းနှင့်အတူဖြောင့်ခုန်မနေပါနဲ့။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူမကိုနောက်မှလာအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်ပြီဆိုရင် သင်တဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရရှိပါသည် ။ နမ်းရှုပ်ခြင်းနှင့် အစပြု၍ ပိုမို၍ ပိုမိုပြင်းထန်သောသူများကိုတည်ဆောက်ပါ။ သင်မသေချာလျှင်သူမကို ဦး ဆောင်ပါစေ၊ သူသည်လျှာကိုမိတ်ဆက်သောအခါသူသည်အရာတခုလုံးကိုတက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုသင်သိသည်။
အားလုံးသူမ၏နမ်း။ လည်ပင်းမှစတင်ပါ booby မြို့မှာရပ်တန့် (နှင့်အကောင်းတစ်မိနစ်အဲဒီမှာနေဖို့), ထို့နောက် tummy ဆင်းအပေါ် shimmy နှငျ့သငျလာမယ့်ဘယ်မှာသိကြ၏။ ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: နောက်သို့လိုက်ရန်ဆင်းသွားအပိုင်း။
FINGERING သို့မဟုတ် OIC ကိုထွက်ထွက်မတိုင်မီအတော်လေးလုံးအတွက်နမ်းပါ
Beverly Hills အသားတင်ရကျိုးနပ်၏အစစ်အမှန်အိမ်ရှင်မ
သင်သည်သင်၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မိန်းကလေးအားစိတ်လှုပ်ရှားစေရန်သင်လိုအပ်သည်။ လျှာများဖြင့်နမ်းခြင်းသည်ပူ။ တင်းမာမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ပါကသူမကိုစိုစွတ်စေလိမ့်မည်။
ငါလည်ပင်းနှင့် clit ချိတ်ဆက်နေကြသည်နီးပါးယုံကြည်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနင့်နင့်ကိုနမ်းနမ်းနေသလိုမျိုးဖြစ်စေတယ် ကအခြေခံအားဖြင့်အော်ဂဇင်ပါပဲ။ သူမ၏နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းသောအခါသင်၏လည်ပင်းကိုဆင်းသင်၏လက်ချောင်းများကို run, သူမအပေါ်သွားသည့်အခါလည်ပင်းမှာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ရှိရှိအအေးမိ, ကသူမ၏ရိုင်းပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဟာကိုအရင်မေးဖို့လိုတယ် ဒါကြောင့်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ တဖန်သင်တို့မို့ရန်မလိုပါ, မကြောက်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်ချောင်းတစ်ဝိုက်မှာလူတိုင်းကအရာရာတိုင်းကိုဖြစ်ထွန်းစေဖို့လိုအပ်တဲ့အရာပဲ နောက်မှသူမသည်စိတ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိဖြစ်စေသည်။ သူမ၏လည်ပင်းကိုအလူးအလဲဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်သူမကိုလည်ချောင်းနှစ်ဖက်ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်သူမကိုအကောင်းဆုံးကာမဂုဏ်ခံစားရန်အတွက်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်အမှန်တကယ်နမ်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါပျော်စရာကောင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာလိင်ဆက်ဆံပါမည်ဟုအော်ဟစ်။ ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏လက်ကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်သို့ချပါ
၎င်းကိုအတော်လေးနှေးကွေးစွာပြုလုပ်ပြီးသင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတကယ်ကိုင်ထားသကဲ့သို့ဖိအားပေးပါ - ပူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ကို ဖြတ်၍ သင်၏လက်ကိုတင်ပါ
FINGERING သို့မဟုတ် CLIT ပွတ်တိုက်သည့်အခါ၌မဖြောင့်ပါနဲ့
အဲဒီအစားသူမပေါင်ကိုသူမပေါင်တစ်လျှောက်၊ အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေပတ်ပတ်လည်နဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေစွာအနားယူခြင်းဖြင့်သူမကိုလှောင်ပြောင်ပေးပါ သငျသညျသူမ၏ထိဖို့အတှကျသူမ၏အခြေခံအားဖြင့်သူမ၏တောင်းပါစေ။
ဒါတွေကိုမမေ့နိုင်ဘူး သင်တစ် ဦး ဦး ချိုကို honking နေကဲ့သို့သူတို့ကိုဖမ်းပြီးပေမယ့်ညင်ညင်သာသာသူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားပါ။ Boob များကိုအချိန်တိုင်းကစားသင့်သည် - လိင်ဆက်ဆံစဉ်နမ်းခြင်း၊ လက်ချောင်းကိုင်ခြင်း၊ ဆင်းခြင်းတွင် - သူတို့သည်ကြီးမားသောအလှည့်ဖြစ်သည်။
နို့သီးခေါင်းနှင့်အတူကစားခြင်းယောက်ျားတွေဖြစ်ပါတယ် အဓိကအလှည့် ။ နို့သီးခေါင်းနှင့်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာမှာသူတို့ကိုနို့တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်ညင်ညင်သာသာကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအထိခိုက်မခံတဲ့အတွက် Lollipop လိုပဲသူတို့အပေါ်မစုပ်ဘူး။ သငျသညျညင်ညင်သာသာသူတို့ကိုလိမ်သူတို့ကိုနို့စို့မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခုမှာထက်ပိုပြီးမလုံလောက်ပါ နှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုဆင်းသည်။
ဤနေရာတွင်ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏လက်မောင်းတစ်ခုလုံးကို ၀ င်ရောက်ရန်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာရစ်သမ်သို့ရနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနက်နဲသောပင်လယ်မှာလက်ချောင်းချပြီးပိုကောင်းတယ်။
ဖြေးညှင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောခံစားရပြီးမိန်းကလေးကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်သည့်နည်းဖြစ်သည်။ တစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ မီတာနှုန်းဖြင့်သွားလျှင်စိတ်ထိခိုက်မည်သို့မဟုတ်မခံစားရပါ။
မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကနေအော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ကြဘူး၊ ဒါကြောင့် clit ကိုရှာပြီးသင့်မိန်းကလေးကိုလာဖို့အရေးကြီးတယ်။
CIRCULAR MOTIONS တွင် CLIT ကိုပွတ်ပေးပါ
နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာချွတ်ပါ။ အဆိုပါ clit အားလုံးတည်ဆောက်အကြောင်းပါကန်းကျင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ယူပါလိမ့်မယ် အထွတ်အထိပ်သို့မိနစ် 20 ဒါကြောင့် comfy ရ !!
သွား clit နှင့်လက်ချောင်းများ
အရာရာကိုရောနှောဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ clit ပွတ်ခံရခံစားလျှင်, နည်းနည်းအဘို့အလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းပြီးတော့နောက်ကျောကိုသွားပါ ။ သငျသညျလက်ချောင်းများစိုစွတ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်င်ဒါကြောင့်သူမအဘို့တကယ်ကောင်းသောခံစားရပါလိမ့်မယ်။
တုန်ခါသည့်အချိန်သည် sexy အချိန်ဖြစ်သည် ။ မိန်းကလေးအများစုသည်အခြေခံသာသနာပြုများထံမှ လာ၍ မရနိုင်ပါ။ သို့သော်သင့်အားအခြားနေရာများတွင်အလုပ်များနေပါကတုန်ခါမှုများကိုတွန်းလှန်။ ထွက်ခွာသွားစဉ်တုန်ခါမှုသည်သူမ၏ clit ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်တောက်ပချောမွေ့, သူမ၏ clit နှင့်သင်၏လက်ချောင်းပေါ်မှာထား၏။ ဒါဟာသူမ၏စံချိန်အချိန်၌လာစေပါလိမ့်မယ်။
နားထောင်ကြ၊ မင်းတို့ခေါင်းကို ၁၅ မိနစ်လောက်မင်းရဲ့ချွေးစေးအခွံထဲထည့်ပြီးငါတို့အပြန်အလှန်လေးလေးစားစားထိုက်တယ်။ R.E.S.P.E.C.T. စာရေးသောအခါသူမ Aretha Franklin အလိုရှိသည်။ မိန်းကလေးအများစုသည်မိနစ် ၂၀ ကျော်ရန်လိုသည်။ ရက်ရက်ရောရော Be သူမလည်းရှိမယ့်သည်အထိအဲဒီမှာချစောင့်ရှောက်။
ဆက်ပြီးရောနှောပါ၊ သင်၏လက်ချောင်းများကိုအသုံးပြုရန်မကြောက်ပါနှင့်။ အကောင်းဆုံးသောရောစပ်မှုတစ်ခုမှာသင်၏လက်ချောင်းများကိုထိုးဖောက်ရန်နှင့်လေဖြတ်ရန်အတွက်သင်၏လျှာဖြင့်သူမ၏ clit ပေါ်တွင်ဖိအားအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ် အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယောနိသည်အစာစားရန်ပန်းကန်တစ်ခုနှင့်မတူပါ - ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောချော့မော့သောကစားခြင်းသည်မခံစားရပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှင်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အရာအားလုံးကိုနည်းနည်းချင်းစီလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒါကပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါ။ သူမအသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်လျှင်သူသည်သင်လုပ်နေသည့်အရာကိုသူမနှစ်သက်နေမည်ဆိုပါကသူမသည်သင့်ကိုလျက်နေသည်ကိုမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါ။
အဆိုပါ clit စူပါအထိခိုက်မခံသည်ဒါကြောင့်သင်နှင့်အတူစတင်ရန်ခက်ခဲဖိအားလျှောက်ထားလျှင်အမှန်တကယ်စိတ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ယော Wolf ကALLရိယာများအားလုံးကို
အနားပတ်ပတ်လည်မှာနမ်းနိုင်တယ်၊ သင်ကပန်းကန်တစ်ချောင်းကိုလျှော်နေတယ်၊ ​​အောက်ခြေကနေကန်းကန်းကိုအပြည့်အ ၀ ကိုလျက်နေတယ်၊ ဆိုလိုတာကသင်အခြေခံအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးအတွင်းနှင့်အပြင်အားလုံးကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ ။
အစဉ်အမြဲ CLIT နှင့်အတူကစား, လိင်ကာလအတွင်းပင်
သင်သည်သင်၏ဒစ်ထဲ၌အမှန်တကယ်ကပ်ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ဤပျော်ရွှင်မှုသံလိုက်အားပယ်ချသင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူမ၏လိင်အင်္ဂါကိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တွင်ကစားခြင်းသည်ရူးသွပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အားလက်လှမ်းမီစေသည့်ရာထူးများကိုလည်းပြုလုပ်ပါ။
သူမစိတ်အားထက်သန်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ရင်သူ့ကိုမေးပါ။ သငျသညျထဲသို့ဝင်လျှင်သင်နှစ် ဦး စလုံးလူတို့အဘို့စူပါပူရှိနိုင်ပါသည်, ပေါင်းသူမကတာဝန်ခံသူမပါလျှင်မိန်းကလေးကျိန်းသေလာကြလိမ့်မည်။
ခွေးနှင့် COWGIRL ဖြစ်နိုင်သည်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးခံစားရလိမ့်မည်
နှစ် ဦး စလုံးနှစ် ဦး စလုံးနက်ရှိုင်းသောထိုးဖောက်မှုပေး, ဒါကြောင့်သူမကသင်ကထိပ် Bloke ဖြစ်ခြင်းလျှင်သူမ၏ G-spot သို့မဟုတ်သင်၏အသားအရေသို့မဟုတ်လက်ဆန့်ကျင်ပွတ်သူမ၏ clit မှလာရန်ပိုဖွယ်ရှိပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်သူမ၏ clit ကိုတုန်ခါစေရန် Apply - သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောခံစားရမည့်တုန်ခါမှုကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။
တစ်ခါမှမမေးပါနဲ့ သင်နီးပြီလား နမ်းတာကနေလိင်ဆိုင်ရာအချက်တစ်ချက်
သငျသညျ Vibe ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်သူမအပြီးသတ်ဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရလိမ့်မယ်, ဖြစ်ကောင်းလာမယ့်တက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၁) အဝတ်လျှော်စက် - လျှာယောက်ျားလေးများနှင့်အတူပြီးပြီသူမိန်းကလေးများအသုံးပြုပုံမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအမှန်တကယ်နမ်းဖို့ဘယ်လို
နှစ်) အချင်းယောက်ျားတို့၊ ဤအရာသည်မိန်းကလေးများမှထိုးနှက်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်နေစဉ်သင်မည်သို့ပြုမူရမည်နည်း